“ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်” | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on October 10, 2014
Posted in: အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: အစ္စလမ်ဘာသာဆိုသည်မှာ, ၀ဋ်ဆိုသည်မှာ.	Leaveacomment
ဆရာမကြီး ဒေါက်တာမတင်ဝင်း ပြောခဲ့တဲ့ ထင်ရှားလှတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ။ မည်သူမျှ ဝဋ်ကို မရှောင်လွှဲနိုင်ကြပါဘူး။ လူတွေဟာ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကံအတွက် တစ်ချိန်ကျလျှင်တော့ တူသောအကျိုးပေး ခံစားကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မူဆလင်တွေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ သေကြေ၊ ပျက်စီးနေကြရတာဟာလည်း အတိတ်ဘဝက ဆိတ်၊ နွား၊ သိုးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် လည်လှီးသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံရဲ့ အကျိုးဆက် ဝဋ်ကြွေးတွေပါ။ တူသောအကျိုးပေးတွေပါပဲ။ ဒီနေ့ ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တဲ့ သဘော၊ လက်ရှိဘဝမှာပင် အကျိုးပေးတဲ့သဘောရှိတဲ့ သတင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံမှာ မူဆလင်မိသားစုတစ်ခုက အစ်ဒ်နေ့ (Eid Al-adha) မှာ လည်လှီးသတ်ပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို ယဇ်ပူဇော်ဖို့ ဆိတ်တစ်ကောင်ကို ဝယ်ထားပါတယ်။ ဒီဆိတ်ကို ထားဖို့ရာ ခြံဝင်းထဲ နေရာလွတ်မရှိလို့ သူတို့အဆောက်အဦးခေါင်မိုးမှာ တင်ထားပါတယ်။ ဆိတ်က ၎င်းကို ဖမ်းဆီးနေတဲ့နေရာက လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ၆ ထပ်မြင့်တဲ့ အိမ်အပေါ်ထပ်ကနေ ခြံဝင်းထဲ ခုန်ချပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိတ်က မြေပြင်ပေါ်ကို ကျတာမဟုတ်ပဲ ခြံဝင်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ၎င်းကိုသတ်ဖို့ ဝယ်ထားတဲ့သူရဲ့သား အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ် ဟီဗယ် ယေလ်ဒီရင်မ်ပေါ်ကို တည့်တည့်ကျလို့ တူရကီမူဆလင်လေး အစ်ဒ်နေ့ မတိုင်မီမှာပဲ ဆိတ်အစား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို သွေးအလူးလူးနှင့် အသက်ပူဇော်သွားပါတယ်။
ဆိတ်က တမင်တကာပဲ လူတည့်တည့်ကို ခုန်ချသလား၊ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်မှု သက်သက်လားကတော့ ဆိတ်ကိုယ်တိုင်မှပဲ သိနိုင်ပါမယ်။
ယေလ်ဒီရင်မ်ရဲ့ ဖခင်ကတော့ သူ့သားကြုံရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးအတွက် ယူကြုံးမရ ငိုကြွေးနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စာဖတ်နေရင်းနှင့် “သြော်… ဆိတ်ကို လည်လှီးသတ်မယ် ဆိုတုန်းကတော့ ပြုံးရွှင်နေမှာ… အခု ကိုယ်သားသမီး ခံစားရတော့ ယူကြုံးမရ ဆိုပါလား… မူဆလင်တွေဆိုတာ ကိုယ့်ထိမှ နာတတ်တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား မရှိသူတွေပဲ” လို့ တွေးမိပါတယ်။ အခုတော့ ယေလ်ဒီရင်မ်ရဲ့ ဖခင်ကတော့ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမယ်မှန်း မသိဖြစ်နေပုံ ရပါတယ်။ ဆိတ်ကိုလား၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုလား၊ သူ့ကိုယ်သူလား သိတော့ပုံ မရတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဒါတွေက ကံ ကံရဲ့ အကျိုးပေးတွေပါ။ မူဆလင်တွေ နွား၊ ကျွဲ၊ ဆိတ် တွေ သတ်ခဲ့လို့ ယခုလို ဆိတ်ရဲ့ ပြန်သတ်တာကို ခံရတဲ့ ဝဋ်ကြွေးပါ။ ဆိတ်ကို သတ်ဖို့ကြံပေမယ့် မိမိသားသာသေသွားပြီး သူများမကောင်းကြံ ကိုယ်သာခံလိုက်ရတာပါ။ အကုသိုလ်ကံက လက်ငင်းအကျိုးပေးသွားတာပါပဲ။ ဒီအခိုက်မှာပဲ ဆရာမကြီး ဒေါက်တာမတင်ဝင်းရဲ့ “ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်” ဆိုတဲ့စကား နှင့် “သဒိသံ ပါကံဇနေတိ –တူသော အကျိုးပေးတတ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ဖြတ်ကနဲ အမှတ်ရမိတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ “မူဆလင်တွေတော့ အစ်ဒ်နေ့တွေမှာ လည်လှီးခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်တွေက စစ်မြေပြင်မှာ ခေါင်းပြတ်တွေနှင့် သေဆုံးရလေပြီ၊ ဝဋ်ကြွေးဆိုတာ ကြောက်စရာ ကောင်းလှပါတကား” လို့ ဆင်ခြင်မိပါတယ်။
သတ္တဝါအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ!
← IS တပ်သားသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် အီရတ် ကျွန်ဈေးကွက်၌ အမျိုးသမီးများကို ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့် ရောင်းချနေ
ကမ္ဘာ့ပညာရှင်တို့ မျက်လုံးထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ →